Rut 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Elimelek abusua tu kɔɔ Moab (1, 2)
Naomi, Orpa, ne Rut bɛyɛɛ akunafo (3-6)
Rut bataa Naomi ne Naomi Nyankopɔn ho (7-17)
Naomi ne Rut san kɔɔ Betlehem (18-22)
1 Atemmufo no bere so no,*+ ɔkɔm baa asaase no so, na ɔbarima bi ne ne yere ne wɔn mma mmarima baanu tu fii Betlehem+ a ɛwɔ Yuda kɔyɛɛ ahɔho wɔ Moab+ asaase so. 2 Ɔbarima no din de Elimelek,* ne yere din de Naomi,* na ne mma baanu no din de Malon* ne Kilion.* Ná wɔyɛ Efratafo a wofi Betlehem a ɛwɔ Yuda. Bere a wokoduu Moab asaase so no, wɔtenaa hɔ. 3 Bere bi akyi no, Naomi kunu Elimelek wui, na ɛkaa ɔne ne mma baanu no. 4 Akyiri yi, ne mma no waree Moabfo mmea. Ɔbaako din de Orpa, ɛnna ɔbaako nso de Rut,+ na wɔtenaa hɔ bɛyɛ mfe du. 5 Afei ne mma baanu no, Malon ne Kilion nso wuwui. Enti ɔbea no kunu ne ne mma baanu no nyinaa wu gyaw no. 6 Bere a ɔwɔ Moab asaase so no, ɔtee sɛ Yehowa asan abɛhwɛ ne nkurɔfo ama wɔn aduan, enti ɔne ne nsenom siim sɛ wɔrefi Moab asaase so asan akɔ. 7 Otu fii baabi a na ɔne ne nsenom baanu no te no. Bere a wɔnam kwan so resan akɔ Yuda asaase so no, 8 Naomi ka kyerɛɛ ne nsenom baanu no sɛ: “Monsan, obiara nkɔ ne maame fie. Yehowa nna ɔdɔ a enni huammɔ adi nkyerɛ mo,+ sɛnea mo nso moada no adi akyerɛ mmarima a wɔawu no na moada no adi akyerɛ me no. 9 Yehowa mma munnya ahotɔ* wɔ mo kununom fie.”+ Afei ofifew wɔn ano, na wɔn nyinaa sui denneennen. 10 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Daabi, yɛne wo bɛkɔ wo nkurɔfo nkyɛn.” 11 Naomi nso kae sɛ: “Me mma, monsan. Dɛn nti na mopɛ sɛ mo ne me kɔ? Metumi asan awo mma ama moaware wɔn anaa?+ 12 Me mma, monsan. Monkɔ, na manyin dodo sɛ mɛware bio. Sɛ meka sɛ metumi anya kunu anadwo yi awo mma mpo a, 13 mubetumi atwɛn ama wɔanyinyin? Mubetumi atwɛn wɔn a morenware? Daabi, me mma. Mo asɛm yɛ me awerɛhow paa, efisɛ Yehowa ne me anni no yiye.”+ 14 Ɔkaa saa no, wɔsan sui denneennen, na Orpa few n’ase ano ne no dii nkra. Rut de, wansan; ɔbataa ne ho. 15 Enti Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Orpa asan kɔ ne nkurɔfo ne n’anyame nkyɛn. San na wo ne no nkɔ.” 16 Nanso Rut ka kyerɛɛ no sɛ: “Nhyɛ me sɛ minnyaw wo hɔ nsan nkɔ. Baabi a wobɛkɔ no, ɛhɔ na mɛkɔ, baabi a wobɛda no, ɛhɔ na mɛda. Wo man bɛyɛ me man, na wo Nyankopɔn ayɛ me Nyankopɔn.+ 17 Baabi a wubewu no, ɛhɔ ara na mewu, na ɛhɔ ara nso na wobesie me. Gye owu na ɛbɛtetew me ne wo ntam, anyɛ saa a Yehowa ntua me ka na ɔnsan mfa bi nka ho.” 18 Bere a Naomi hui sɛ Rut asi ne bo sɛ ɔne no bɛkɔ no, wanhyɛ no bio. 19 Enti wɔn baanu no toaa so koduu Betlehem.+ Bere a woduu Betlehem pɛ, kurom hɔfo nyinaa puw bɛhwɛɛ wɔn, na mmea no bisae sɛ: “Naomi ni?” 20 Ɛnna ɔka kyerɛɛ mmea no sɛ: “Mommfrɛ me Naomi.* Momfrɛ me Mara,* efisɛ ade nyinaa so Tumfo no ne me adi no nwenweenwene.+ 21 Mekɔɔ no ma, nanso Yehowa ama maba no nsapan. Dɛn nti na mofrɛ me Naomi, bere a Yehowa abrɛ me ase, na ade nyinaa so Tumfo no ama awie me bɔne yi?”+ 22 Saa na ɛyɛe a Naomi ne n’ase Rut a ɔyɛ Moabni no san fii Moab asaase so bae.+ Bere a woduu Betlehem no, na wɔafi ase retwa baali.*+
^ Anaa “Bere a na atemmufo no hwɛ ma atɛntrenee kɔ so no.”
^ Ɛkyerɛ, “Me Nyankopɔn Ne Hene.”
^ Ɛkyerɛ, “Anika.”
^ Efi Hebri asɛmfua bi mu. Ebetumi akyerɛ, “nofoonofoo; ɔyareyare.”
^ Ɛkyerɛ, “Ne Nna Reba Awiei.”
^ Nt., “homebea.”
^ Ɛkyerɛ, “Nwenenwene.”